သင်၏ Apple Watch သတိပေးချက်များကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ အသုံးချ | ငါက Mac ကပါ
သင်၏ Apple Watch သတိပေးချက်များကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
အသစ်သောအကြီးအအားသာချက်များတစ်ခုမှာ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ အဆိုပါတိုင်ပင်နိုင်ပါလိမ့်ရန်ဖြစ်ပါသည် အသိပေးချက်များ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့လက်မောင်းကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစက္ကန့်တိုင်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်သင့်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးလုပ်နေတာကြောင့်၎င်းကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်လက်တွေ့ကျကျလက်ခံရရှိသည်။ သို့သော်၊ သင်အတွက်အရေးကြီးသောအရာများသာမကတစ်နေ့တာအတွင်းသင်၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့မည့်အရာတစ်ခုကိုလည်းသင်အသိပေးချက်အားလုံးကိုလက်ခံချင်မှရပေမည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ် သင်၏ Apple Watch သတိပေးချက်များကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။
1 သင်၏ Apple Watch တွင်သင်လိုချင်သောအသိပေးချက်များသာ
1.1 သင်၏ Apple Watch တွင်မည်သည့်အသိပေးချက်များကိုသင်ရရှိနိုင်သနည်း။
သင်၏ Apple Watch တွင်သင်လိုချင်သောအသိပေးချက်များသာ
သင်လိုချင်သောတစ်ပတ်လျှင်တစ်ပတ်သာကျန်တော့သည် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ဒါကြောင့်သင်ကသင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင်လိုချင်သည့်အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်ရန်ကူညီပေးမည့်အခြား mini-guide နှင့်အတူသွားကြစို့။
မသန်စွမ်း သင်၏ Apple Watch တွင်သင်လက်ခံရရှိသည့်အသိပေးချက်များကိုပြုပြင်ပါ ရိုးရိုးအဆင့်အနည်းငယ်ကိုသင်လိုက်နာရပေမည်၊ သို့သော်သင့် iPhone ပေါ်တွင်၊ နာရီအက်ပ်တွင်ရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
၁။ အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့.
၂။ "သတိပေးချက်များ" ကိုသွားပါ။
၃။ သင်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုကိုသင်ပြင်ဆင်လိုသည့် app ကိုနှိပ်ပါ Apple Watch
၄။ "စိတ်ကြိုက်" ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ရှာတွေ့မည့်ကွဲပြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖွင့် / ပိတ်ပါ။
သင်၏ Apple Watch တွင်မည်သည့်အသိပေးချက်များကိုသင်ရရှိနိုင်သနည်း။
ရရှိနိုင်သောအပလီကေးရှင်းတစ်ခုချင်းစီတွင်သင်၏ထူးခြားသောအသိပေးချက်များရှိသည်။ သင်အသစ်ပြနိုင်သည် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့။ ဥပမာ:
con စာပို့ သင်ပြုပြင်ထားသောအကောင့်တစ်ခုစီအတွက်အီးမေးလ်အကြောင်းကြားစာများကိုသက် ၀ င်စေခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
En ဖုန်းကို သင်ခေါ်ဆိုမှုများ၏အသိပေးချက်များနှင့်အသံ activate သို့မဟုတ်ပိတ်ထားနိုင်သည်။
con လှုပ်ရှားမှု သင်၏သတိပေးချက်များ၊ တွေ့ဆုံခဲ့သည့်ပန်းတိုင်များ၊ အောင်မြင်မှုများနှင့်အပတ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်များကိုသင်ရရှိသည်၊ မရဆုံးဖြတ်နိုင်သည် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့.
con သတိပေးချက်များ, ဒီ app ၏သတိပေးချက်များနှင့်အသံ။
En ပြက္ခဒိန်, သင်သည်သင်၏နာရီအားဖိတ်ကြားချက်များသတိပေးချက်များ, ဖိတ်ကြားချက်မှတုံ့ပြန်မှု, မကြာသေးမီဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်မျှဝေပြက္ခဒိန်များအတွက်သတိပေးချက်များကိုပြသရန်ခွင့်ပြုသို့မဟုတ်မနိုင်သည်။
စီမံခန့်ခွဲ သင့် Apple Watch တွင်အသိပေးချက်များ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင်သည်အနည်းဆုံးအခိုက်အတန့်အားဖြင့်သင်အမှန်တကယ် "စိတ်မ ၀ င်စားသော" အဆက်မပြတ်သတိပေးချက်များကိုလက်ခံခြင်းကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်။ ဘက်ထရီကိုချွေတာပါ ပြီးတော့သင်၏ပန်းသီးလက်ပတ်နာရီသည်ညအထိဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » သင်၏ Apple Watch သတိပေးချက်များကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
Retina မဟုတ်တဲ့ display တွေအဆုံးရောက်နေပါပြီ